Asked by arty 9 iminyaka edlule
When I check to see if my plugins are updated, this one is listed as an unknown plugin. Researching doesn't really seem to tell me exactly what this plugin is, why I have… (funda kabanzi)
Asked by Grey 9 iminyaka edlule
Last reply by kobymeir 9 iminyaka edlule
Apple's Mobile Me (sync, find my iPhone, etc.) is switching to iCloud.com. Mobile Me worked fine with Firefox, but when we try to sign in to iCloud.com we get the messag… (funda kabanzi)
Asked by baijuvasudev 9 iminyaka edlule
Asked by satenroja 8 iminyaka edlule
Asked by lgeitgey 9 iminyaka edlule
When my computer locks up and I am trying to access the internet through Firefox, one of the processes using over 6,000K is titled: Install Brain Service. Do you know w… (funda kabanzi)
Asked by Jhclayco 9 iminyaka edlule
Last reply by Bobcurt 9 iminyaka edlule
Asked by tedcurtin 9 iminyaka edlule
Asked by jwdesselle 9 iminyaka edlule
Last reply by rstrong 9 iminyaka edlule
After I installed the latest version of FireFox, I cannot access the website, FoxNews.com. I get the following error message: Access Denied You don't have permission to … (funda kabanzi)
Asked by DarleneJump 9 iminyaka edlule
I am running Ubuntu 11.04 on my laptop and use firefox as my main browser. I have a very strange experience when browsing video sites like Youtube.com or Bumperhit.com So… (funda kabanzi)
Asked by Sujata 8 iminyaka edlule
It would appear that since the most recent update to Firefox, the Windows task bar (Windows 7) no longer retracts when viewing videos on YouTube in full-screen mode (NOT … (funda kabanzi)
Asked by Botcho 9 iminyaka edlule
Last reply by dogbaker 9 iminyaka edlule